Warkii.com-News and information about Somalia FAALLO: Marnaba ha guursan gabadha leh afartaan calaamo (Sababaha oo sharraxan) - Warkii.com-News and information about Somalia
FAALLO: Marnaba ha guursan gabadha leh afartaan calaamo (Sababaha oo sharraxan)
Shabakadda Guuxa ayaa maanta talo ula heelan Soomaalida guur-doonka ah, waxaana usoo bandhigi doonaa afar calaamadood oo ay tahay in aysan guursan dumarka ay ku arkaan. Afartaas calaamadoodna mid walba sharraxaad gooni ah ayaan ka bixin doonaa sababta ay tahay inay uga fogaadaan dumarka leh.
CALAAMADDA 4AAD: Ha Guursan Gabadha Nolosheeda Keliya Ka Fikirta
Ragga Soomaaliyeed ee guur-doonka ah waxay tahay inay ka fogaadaan dumarka noloshooda keliya ka fikira, ama inta ugu badan ku qarash gareeya inay qabsadaan keliya waxay u baahan yihiin.
Dumarka nuucaas ah awood uma lahan inay fahmaan waxa uu uga baahan yahay shaqsiga ama dadka ku xeeran. Haddii aad calaamadda nuucaas ah gabar ku aragto isla markaana aad ku fikireysay inaad guursato waa sabab ay tahay inaad ku bedesho qorshahaagii guurka. Maxaa yeelay ma ahan inay gabadhu ujeedka nolosheeda iyadu isku koobto waa inay ka fikirto ninka iyo reerka ku xeeran.
CALAAMADDA 3AAD: Ha Guursan Gabar Marwalba U Saaxiib Ah Inay Adiga Kaa Careysiiso
Dumarka nuucaan ah waxay waqtiga oo dhan ku fikiraan in uusan jeceleyn seygoodu, waxay la daba-joogaan baaritaan, taasoo sabab u noqon karta inuu caroodo ninkeedu, waana sabab ugu dambeyn reerka oo dhan dumin karta.
Dumarka nuucaas ah maalin walba waxaa haya cabsi joogto ah oo ku saabsan xiriirka kala dhexeeya seygeeda, meel walba oo uu aadana shaki ayaa ku beeran. Sidaas darteed waxaa habboonaan laheyd inaad bedelkeeda guursato gabadha isfareysa inay noqoto xalka welwelka seygeeda. Ma ahan inaad guursato midda dhibaatada kugu abuureysa.
CALAAMADDA 2AAD: Marnaba Ha Guursan Talisada
Waxaa jira dumar jecel inay iyagu koontaroolaan wax walba oo ku saabsan reerka. Waxay sidoo kale dumarka nuucaas ah rabaan inay saacad walba la socdaan waxa uu seygoodu sameynayo, waxayna doonayaan inay wax walba u dhacaan qaabka ay iyagu jecel yihiin.
Intaas waxaa sii dheer waxay doonayaan inay iyagu lahaadaan go’aan walba oo ku saabsan reerka, haddii aad usoo jeediso xitaa aragti macquul ah, horay ayey kaaga soo diideysaa. Sidaas darteed maba isku waari doontiin ee hadda guurkeeda ka fogoow.
CALAAMADDA 1AAD: Ha Guursan Gabadha Baahi Badanta Ah
Haddii aad guursato dumarka nuuca loo yaqaanno baahi badanta waxay noqon kartaa dhibaatada ugu weyn ee noloshaada. Hadda waxay u oyneysaa inaad siiso waxa ay u baahan tahay, saacad ka dibna gacanta ayaa u taagan oo sheey kale ayey dooneysaa.
Waxyaabaha ay kaa dooneyso ayaanba dhammaad laheyn. Marka waxay ku habboon tahay inaad hadda ka fiirsato dumarka nuucaas ah inta aadan faraha la gelin. Bedelkeedana aad doorato gabar inta aysan wax ku weydiin la tashaneysa nolosheeda, oo haddii uusan sheygaasi reerka muhiim u aheyn meesha ka saareysa.
Waad ka doodi kartaan afartaan qodob ee aan idiin soo bandhignay, kala soco shabakadda warkii.com qormooyin badan oo ku saabsan arrimaha qoyska.